निःशुल्क भनेको डाइलोसिस सेवामा कति मुल्य तिर्नुपर्छ ? « News of Nepal
निःशुल्क भनेको डाइलोसिस सेवामा कति मुल्य तिर्नुपर्छ ?
न्युज अफ नेपाल, भक्तपुर । मिर्गौला डायलासिस गर्ने औषधिमा बिरामी बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । मिर्गौला पीडित बिरामीले घरमै बसेर पेटमा पाइपका माध्यमबाट औषधियुक्त पानी प्रवेश गराई डायलासिस गर्ने गर्छन् ।
भक्तपुरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मिर्गौला पीडितहरुले सरकारले निःशुल्क भनेको डाइलोसिस सेवा लिन आफूहरुले बढी रकम तिरेर कालोबजारमिा औषधि किन्नुपरेको गुनासो गरेका हुन् । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा औषधि बिक्रेताले बिरामीलाई औषधि नदिई मूल्य वृद्धि गरेपछि बिरामीले बाध्य भएर महङ्गोमा औषधि किनेर डायलासिस गर्नुपरेको गुनासो गरेका हुन् ।